>Saung Yun La – No Extra Lines and No Whiteout in this poem | MoeMaKa Burmese News & Media
>Saung Yun La – No Extra Lines and No Whiteout in this poem
နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၀
မျက်စိနှစ်ကွင်းကို မိုးလင်းဆိုင်လို ဖွင့်ထားဖို့လည်းလိုတယ်…
ဘေးတီး လက်ခေါက်မှုတ်ရုံလောက်တော့ လုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူး …
၃၁ဘုံရှိ လူ နတ် ဗြမ္မာ သတ္တဝါတွေကို မေတ္တာပို့ပါ….
ညီညွတ်ရေးကို အသက်ကယ်ဆေးလို ဆောင်ထားပါ….
ဤနေရာတွင် ဤကဗျာကိုအဆုံးသတ်သည်။ ။